Mongolia: Manimba ny fomba fiainan’ny mpifindrafindra monina ny fiovan’ny toetr’andro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Desambra 2009 12:56 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, 繁體中文, 简体中文, srpski, বাংলা, Italiano, English
Hatry ny fahagola no nilàn'ny fianakaviana mpifindrafindra monina avy any Mongolia tamina toerana midadasika fa izany no mifandrindra amin'ny fomba fiainany. Taloha dia azon'ny biby fiompiny nivalamparana avokoa na ny sakafom-biby na ny rano. Saingy niova avokoa izany rehetra izany, fa nanimba ny fomba fiainan'ireo fianakaviana ireo ny fiovaovan'ny toetr'andro.
Saripikan'i Tonio94 ary arovan'ny Creative Commons license.
Nampivandravandra izany fiovana izany ny lahatsoratr'i Joshua Kucera ao amin'ny Eurasianet :
Nisy fiantraikany goavana tamin'ny mpiandry ondry any Mongolia, izay mahatratra ny 40%n'ny mponina 3 arivoarivo, ny fitomboan'ny hafanana ankapobeny. Tafakatra 1,6°C isan-taona ny maripana hatramin'ny taona 1940. Mihamaharotra kokoa ny hafanan'ny toetr'andro, ary “miovaova, mihena amin'ny toerana iray nefa mitombo amin'ny toerana eo anilany” ny rotsak'orana, araka ny filazan'ny Minisitry ny tontolo iaianana sy ny zavaboary. Mihamihisaka tsikelikely mianavaratra ny tany hay ao Gobi, any atsimon'ity firenena ity.
Mihena ny firaofan'ny biby, izay loharanon-tsakafo manan-danja amin'izy ireo, ahitra noho ny fitomboan'ny tany hain'i Gobi. Miatrika olana eo amin'ny rano fisotro ihany koa ny mponina, araka ny fitantaran'ny mpamaham- bolongana Mandah, nanoratra ny olana atrehin'ny fokonolona amin'ity resaka rano ity:
Mitsonika tsikelikely ary miha-manify ny ranomandry an-tendrombohitr'i Mongolia noho ny fitomboan'ny hafanana amin'ny ankapobeny. Hahatratra 131 santimetatra izany hatevin-dranomandry hitsonika izany amin'ny taona 2039. Ny manampahaizana dia milaza fa hiatrika tsy fahampian-drano madio fisotro ny mponina 108 arivoarivo amin'ny tany iray manontolo alohan'ny taona 2025. Hatramin'ny 1996 no efa nihena hatrany ny rano anaty tany any Mongolia. Ritra ny farihin'ny faritr'i Goribi tahaka an'i Taatsiin tsagaan, Adgiin tsagaan, Ulaan, Orog lakes ary ny renirano hafa.
Mameno ny momba io fiovaovan'ny toetr'andro io ny mpamaham- bolongana sady botanista Ariungerel:
Mihamazava kokoa ankehitriny ny dikan'ny teny manao hoe “harena ny rano”. Lavitra ny ranomasina ny firenentsika ary kely kokoa noho ny an'ny firenenkafa izay manana tahirindrano an-tanety sy ambanin'ny tany ampy ny antsika. Mandamina ny fiainany araka tahirin-drano ny olona aty amintsika, ohatra: mandritra ny fotoan-dririnina no ampiasaina ny rano lavi-toerana satria kely ny ranomandeha any, ranomandry ihany no misy any. Nitantara ny Ntaolo fa rora no nampiasainy tamin'ny androny hanasany tarehy sy tanana, fa ao anatin'ny tontolo ankehitriny kosa, efa betsaka kokoa ny rano ampisaina hanaovana ireo zava-droa loha ireo.
Maro ny lohahevitra tsy mba fantatry ny ao an-toerana loatra, ary manoatra noho izany ny zavatra manerantany. Saingy, misy tetikasa ao an-toerana antsoina hoe Nomad Green (dika manta: Mpifindrafindra monina maitso) nandray andraikitra hampianatra ny fampiasana fitaovana entin'olo-tsotra mampahalala vaovao tahaka ny bolongana, sary ary lahatsary mba ahafahana milaza ny tantaran'ity firenena ity sy ny olana ara-tontolo iainana entiny. Nanomboka tamin'ny taona 2009 sy iarahan'ny fikambanana sy sampan-draharaham-panjakana miasa, ary efa voapetrapetraka ny daty hanaovana atrikasa isan-karazany ao andrenivohitra Ulaanbaatar sy tanàna hafa manodidina an'i Mongolia.
Sarin'ny atrikasa Nomad Green nataon'i Portnoy (Lehilahy Miasa) ary arovan'ny Creative Commons license.
Efa nahitana dingana tsara amin'ny fampianarana ny Mongole amin'ny fampiasana ireo fitaovana entiny mitantara ny fanamby atrehin'ny fireneny eo amin'ny resaka tontolo iainana ny tetikasa. Anisan'ny porofo amin'izany dingana izany dia ireo mpamaham-bolongana roa efa nolazaina teo aloha teo tamin'ity lahatsoratra ity dia i Mandah sy i Ariungerel dia anisan'ny tao anatin'ny tetikasa Nomad Green avokoa, ary manampy ireo ny feon'ireo liana amin'ny ho avin'ny tontolo iainana any Mongolia.
Tantaran'ny Mongolia farany
10 Aogositra 2017Azia Afovoany sy Kaokazy
15 Jolay 2017Karaiba
04 Novambra 2016Azia Afovoany sy Kaokazy